Shirka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya - BBC Somali
Shirka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
24 Sebtembar 2010
Shir gaar ah oo ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya oo uu guddoominayay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon, ayna ka qaybgaleen wakiilo ka socda gobolka iyo bulshada caalamka, ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada New York ee dalka Maraykanka.
Madaxwaynaha dowladda ku meelgaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa warbixin siiyay ku aadan xaaladda siyaasadda iyo amniga ee dalka, iyadoo sidoo kalena guddoomiyaha midowga Africa Jean Ping uu faahfaahin kabixiyay howlgalada ciidamada midowga Africa ee Soomaaliya.
Hadaba, gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray war saxaafadeed.
Waa kan Axmed Cabdinuur oo noo soo koobaya.
Hadalada kulul ee shir madaxeedka kooba ee arrimaha Soomaalida looga hadlayay ee magaalada New York, ayaa waxyaabaha loo soo jeediyay waxaa ka mid ah in warbixinno lagu kalsoonaan karo, oo sheegaya xatooyada hantida dadwaynaha ay caqabad ku noqotay howlaha dowladda ku meelgaarka ah.
Musuqmaasuqu wuxuu dowladda Soomaaliya ka luminayaa hanti muhiim u ah, shacabka Soomaaliyeedna waa la khiyaamayaa, deeq bixiyayaashana waxaa uu musuqmaasuqu ka hor istaagayaa in ay ku dhiiradaan in ay ku yaboohaan lacag kale.